Home Wararka Kheyre oo Markale Soo kala Daadinta Galmudug ama soo Leexsashadeeda u tagay...
Kheyre oo Markale Soo kala Daadinta Galmudug ama soo Leexsashadeeda u tagay Dh/Mareeb
Xasan Cali Khayre ayaa markale tagaya magaalada Dhuusamareeb. Haddaba ujeedadaXasan Kheyre waa maxay ? Dadka aadka ula socdaa arrimaha Galmudug waxay leeyihiin waxaa uu hakaas u tagay inuu sameeyo fargelinno badan oo uu isku dayayo in la abuuro Jawi Galmudug u habeynaya sida ay NN rabto, iyadoo lugta lagu dhufanayo rabitaanka shacbiga reer Galmudug.
Qoor qoor oo ay boorso ku wado dawladda NN ayaa la rabaa inuu ku soo baxo madaxweynaha maamulka Galmudug, si ay u noqoto mid la siman HIrshabeelle iyo K/Galbeed oo ay laba maqaarsaar ka yihiin madaxweynayaal.
Kheyre iyo kooxda la socota ayaa waxa ay kulamo la qaadan doonaan MadaxdoodaGalmudug ee ku sugan magaalada Dhuusamareeb. Wararka ayaa sheegaya in looga hadi doono arrimo ay ka mid yihiin Doorashada Galmudug oo la qorsheynayo in gacanta lagu rimiyo dhawaan.
Dhagarqabe isagaa is oge, ammaanka garoonka diyaaradaha iyo guud ahaan ammaanka magaalada Dhuusamareeb ayaa si weyn loo adkeeyay, waxaana sugidda amniga iska kaashanaya ciidanka dowladda federaalka iyo kuwa AMISOM ee ku sugan gudaha iyo daafaha magaalada, iyadoo aan wax macno ah loo yeelin ciidankii Ahlusunna ee magaaladaas si da weyn u difaacayey muddo sannado ah.
Booqashada Kheyre ku tagayo Dhuusamareeb, waxay ku soo aadeysaa iyadoo khilaaf badani uu ka taagan yahay aqbalaadda 20-kii xildhibaan ee dowladdu u qoondeysay Ahlu-Sunna oo ay ahayd iyadu wax qoondeyso.
Waxaa jira weli cabasho ay abuureyso dowladda NN taas lagu muujinayo in qaar kamid ah beelaha Galmudug ay cabanayaan, taas oo ku aadan qaabka ay Ahlu-Sunna u soo xushay xubnihii laga siiyey baarlamaanka Galmudug.
Sidoo kale inta uu ku sugan yahay Magaalada Dhuusamareeb Xasan Cali Kheyre ayaa waxaa ku dadaali doonaa in loo habeeyo sida ya NN u rabto habka ay u socoto soo xulista Xildhibaanada Cusub ee Baarlamaanka Galmudug iyo arrimaha Doorashada maamulkaas.